Labo ka Mid ah ku Xigeenadii Madaxweynaha DDSI oo Xilalkii Laga Qaaday – Rasaasa News
Mar 30, 2012 Labo ka Mid ah ku Xigeenadii Madaxweynaha DDSI oo Xilalkii Laga Qaaday
Jijiga, Mar 30, 2012 [ras] – Shir uu yeeshay xisbiga kaliya ee ka jira degaanka Somalida Ethiopia, oo la sheegay in lagu qiimaynayey gudiga fulinta ee xisbiga ayaa xilalkii ay hayeen iyo tii xisbigaba laggaga xayuubiyey labo ka mid ah ku xigeenada Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
War ka soo baxay xarunta dhexe xisbiga dawlada degaanka Somalida Ethiopia ayaa sheegay in ay xilalkoodiii waayeen mudane Aadan Faarax iyo mudane Axmed Deeq Maxamed oo labadooduba ahaa madaxwayne ku xigeeno.
Mudane Aadan Faarax, waxaa uu ahaa madaxwayne ku xigeenka iyo Wasiirka Wasaarada Horumarinta Magaalooyinka iyo Warshadaha, halka mudane Axmed-deeq Maxamed uu ahaa Madaxweyne ku xigeenka iyo Wasiirka Horumarinta Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha DDSI.
Gudiga fulinta ee xisbiga dawlada degaanka Somalida Ethiopia ayaa sheegay in ay labadan masuul ku dhaceen qiimayntii gudiga, sababta oo ah waxay ka soo bixi waayeen waajibaadka xilalka ay hayeen.
Qiimaynta gudiga fulinta ee Xisbiga DDSI, ayaa wali ka socota xarunta xisbiga, iyada oo aan la ogayn in masuuliyiin kale ay waayi doonaan xilalkooda iyo in ay ku ekaan doonto labadan masuul.
Waxaa mudo saddex bilood ah ka hore ku lumiyey jagadii ku xigeenimada madaxweynaha degaanka Somalida Ethiopia Dr Suldaan Wali, qiimayn tan la mid ah.
Dawlada degaanka Somalida Ethiopia ayaa sanadkii hore loo sameeyey Saddexdii madaxwayne ku xigeen, si loo kordhiyo hawlaha horumarineed ee degaanka sida la sheego, waxaana hada xilka m/weyne xigeenka haya Mudane Cabdi fataax Maxamuud.
Dawlada degaanka Somali Ethiopia, ayey horumarinteeda shaqo ku kooban tahay degaanada u dhaw xarunta Jijiga, in kasta oo miisaaniyad xoog leh loo qabto degaanka sanad walba.
Masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaan ku raagin xilalka ay ka qabtaan dawlada degaanka Somalida Ethiopia, iyada oo sababta lagu sheego in is qabqabsiga shakhsiyeed ee dhex mara madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale uu keeno shaqo beel.